Ngaba i-Linkedin isebenza njani kumashishini? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
I-Linkedin isebenza njani kwiinkampani?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 288
Namhlanje zininzi iinkampani ezixhamlayo I-LinkedIn yeshishiniKe ukuba unayo kwaye ufuna ukwazi ukuba olu hlobo lweprofayili lusebenza njani, ukwindawo elungileyo. Kuba, ukuqala, uya kufunda ngakumbi malunga neenkampani ze-LinkedIn kunye nento onokuyifumana ngokuba nale akhawunti.
Ngendlela efanayo, uya kwazi amanyathelo ekufuneka uwalandele bhalisela iinkampani ze-LinkedIn kunye nezibonelelo oya kuzifumana ngokwenza njalo. Ke ngoko, funda eli nqaku kude kube sekupheleni ukuze ucacise onke amathandabuzo akho.
Yintoni i-Linkedin yeenkampani?
I-LinkedIn yeenkampani luhlobo lweprofayili ekhethekileyo ngubani ophuhlise eli qonga ukuze iinkampani ezininzi zikwazi ukwenza iprofayili yazo. Ngapha koko, namhlanje ngaphezulu kweenkampani ezingama-30 ezigidi ezineakhawunti kwaye kukho amalungu angaphezu kwezigidi ezingama-690 axhamlayo kweli qonga.
Ngale ndlela, iinkampani, ukongeza kwi qhagamshela nabanye abantu kunye nenkampaniBanokunikezela ngeenkonzo zabo ezahlukeneyo kwaye bathengise iimveliso zabo. Kwangelo xesha, bayapapasha umsebenzi wabo wokufumana umntu ofanelekileyo ukuba asebenze nabo.
Amanyathelo okubhalisa kwi-Linkedin yeenkampani
Ukuze ukwazi Bhalisa iprofayile yenkampani kwi-LinkedIn Inkqubo ilula kakhulu, ngakumbi xa ucinga ukuba uneendlela ezimbini onokuzenza. Kwindawo yokuqala, banokuyenza ngokungena kwiwebhusayithi yeqonga kwaye okwesibini, banokuyenza ukusuka kwiApp mobile.
Kwimeko apho, uza kuyenza ubhaliso kwiwebhusayithi Amanyathelo oza kuwalandela ngala alandelayo:
Ngena kuso nasiphi na isikhangeli kwiphepha elisemthethweni leenkampani ze-Linkedin.
Xa ukwikhasi lakho lasekhaya, cofa ku "Yenza iphepha eliDibeneyo."
Iphepha liza kuvulwa kwaye kuya kufuneka ukhethe icandelo elikuyo ishishini lakho.
Emva koko gcwalisa ifom eya kuvela ngaphandle kokulibala naluphi na ulwazi.
Emva koko jonga ibhokisi ethi "Ndiqinisekisa ukuba ndingummeli wenkampani."
Okokugqibela, khetha "Yenza iphepha" kwaye kunjalo.
Ngale ndlela, Uya kuba sele ubhalisile kwiinkampani ze-LinkedIn Kwaye ukuba ufuna ukuyenza ngokusetyenziswa, inkqubo iyafana kakhulu, ngaphandle kokuba kufuneka uyikhuphele kuqala.
Izinto eziluncedo ze-Linkedin yeenkampani
Iinkampani ze-LinkedIn zikunika izibonelelo ezininzi kwishishini lakho kwaye ukuze ukwazi ukuwajonga uwafunde apha ngezantsi:
Ivelisa amathuba amakhulu okukhula, kuba ikuvumela ukuba ufikelele kubaphulaphuli abathile kwinkampani yakho.
Yazisa abantu abaninzi malunga nenkampani yakho, iinjongo zayo, into eyinikezelayo nayo yonke into enxulumene nayo.
Qinisa umfanekiso wenkampani yakho.
Iya kukuvumela ukuba unxibelelane noluntu ukuze wazi ukuba yeyiphi imiba yenkampani yakho onokuyiphucula.
Yandisa inani lophendlo onaloUkusukela xa ubhengeza inkampani yakho baninzi abantu abazokukhangela ukuba ukonwabele iinkonzo zabo.
Iya kukuvumela ukuba wenze iindlela ezahlukeneyo zentengiso, ukuvelisa umxholo onomdla owomeleza inkampani yakho.
1 Yintoni i-Linkedin yeenkampani?
2 Amanyathelo okubhalisa kwi-Linkedin yeenkampani
3 Izinto eziluncedo ze-Linkedin yeenkampani
Meyi 12, 2021
INDLELA YOKUSETYENZA ITHWEET KWENYE UMSEBENZI?
Ungathumela njani kwi-LinkedIn?